भोलिदेखि काठमाडौं उपत्यकासहितका पेट्रोल पम्प बन्द हुने – Ramailo Sandesh
काठमाडौं उपत्यकासहितका पेट्रोल पम्प भोलि बुधवारदेखि बन्द हुने भएको छ । पम्पमा कार्यरत मजदुरलाई कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था नगरिएको भन्दै पम्प बन्द गर्न लागिएको हो । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसनका कार्यकारी कार्यालय सचिव नारद भण्डारीले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने पम्पका मजदुरलाई खोप नदिएका कारण बुधवारदेखि वाग्मतीका पम्प बन्द हुने बताए।
धादिङ बाहेक काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप लगायतका सबै पम्प बन्द हुने उनले बताए । सरकारले खोप लगाउन सुरु गरे यो निर्णय फिर्ता हुने उनको भनाई रहेको छ ।
अन्य समाचार : नायिका आचल शर्माको नाकको सर्जरी बारे बोलिन , बास्तबिकता के हो? आचल शर्मा आफैले खोलिन यस्तो बास्तबिकता (भिडियो सहित) आचल शर्मा पछिल्लो समयकी निकै चर्चित नायिका तथा मोडेल हुन् । उनले धेरै म्युजिक भिडियो र फिल्महरुमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । र उनले अभिनय गरेको चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोले राम्रै चर्चा कमाएका पनि छन् ।
नाई नभन्नु ल ४ बाट अभिनय यात्रा आरम्भ गरेकी आचल सुन्दर अनुहार, मिलेको जिउडालले गर्दा निकै आकर्षक देखिन्छिन । तर आचल शर्माको नाक हल्का लामो जस्तो देखिन्छ । र यहि बिषयलाई लियर उनले अझै सुन्दर देखिन नाकको सर्जरी गरेको भनेर धेरैले चासो पनि देखाएका छन् । पहिलो चलचित्रको सफलता पछि उनले शत्रु गते र जोनी जेन्टलम्यान नामक चलचित्रमा समेत भूमिका गरिन्।
नेपाली चलचित्र उद्योगमा प्रवेश गर्नु अगावै उनी एक सौन्दर्य प्रतियोगिता जितेकी थिइन् । के आचलले सुन्दरताकै लागि नाकको सर्जरी गरेकी हुन् त ? नायिका आचल शर्माले नाकको सर्जरी गरेको भनेर टिकटकको कमेन्ट सेक्सनमा धेरैले कमेन्ट गरेका छन् । एक अन्तरबार्ताको क्रममा आचलले आफुले नाकको सर्जरी गरेको हल्ला सहि भएको बताएकी छिन् । भिडियो अन्तरबार्तामा ‘नाकको सर्जरी गराएको हल्ला सत्य हो’ भनेर सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिदै उनले भनिन् ‘सत्य हो’ ।
बास्तबिकता के हो त ? सुन्दरताको लागि सर्जरी गरेको नभई नाकमा समस्या भएको कारण सर्जरी गरेको उनको भनाई छ । उनी भन्छिन् ‘मेरो नाकको नाहिना साईडमा मासु पलाको थियो, सास फेर्न अलिकती गार्हो होकि जस्तो भयो मलाई, चेकअप गर्ने क्रममा अहिले फाल्न पर्छ, यो त बढ्दै जाने कुरा हो भनेपछी Unwanted कुराहरु फाल्देको’ ।
मैले प्लाष्टिक सर्जरी गराएको होईन, प्लाष्टिक सर्जरी भनेको त नाक नै बनाउने होनित, मेरो नाक काटकुट गरेको होईन । मात्रै बढेको मासु काटेको हो । प्लास्टिक सर्जरी गरेको भएत चिरिएको मिलाएको दाग देखिन्थ्यो नि त ।
पछिल्लो समय आचल शर्मा टिकटकबाट टाढा छिन् । एक भिडियोमा उनले सुगालाई परेवा भनेपछी फ्यानहरुको निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो । कतिले निकै नराम्रो कमेन्ट गरेका थिए । त्यसैले उनले टिकटकको कमेन्ट सेक्सननै अफ गरेकी थिईन । हेर्नुस् बाकी भिडियोमा ।